Ngwurugwu nke ụwa, gịnị bụ akụkụ nke ụwa? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ugbu a anyị matara oyi akwa nke ikuku, ọ bụ oge na akwa ụwa. Kemgbe oge ochie achọrọ ya ịkọwa ihe anyị nwere n'okpuru Ala jikọrọ ọnụ. Ebee ka mineral si enweta? Ole ụdị nkume dị? Kedu ọkwa ndị ụwa anyị nwere? Enwere ọtụtụ amaghị nke emere na akụkọ ntolite niile nke anyị chọrọ ịma.
Akụkụ nke Geology nke na-amụ ụkpụrụ na usoro dị iche iche nke ụwa bụ Esịtidem Geodynamics. Ourwa anyị nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme ka ndụ dịrị n’ụwa. Ihe atọ ndị a bụ: Siri ike, mmiri mmiri na gas. A na-ahụ ihe ndị a na ụwa dị iche iche.
E nwere ọtụtụ ụzọ iji kọwaa ọkwa nke ụwa. N'ime otu ụdị nhazi, a na-akpọ ha okirikiri. Themfọdụ n’ime ha bụ ikuku, hydrosphere, na ihe ndị dị n’ụwa. Ọ bụ geosphere nke na-achịkọta usoro niile na usoro dị iche iche dị na mbara ụwa anyị. Na n'ígwé na-ekewa abụọ: Mpụga na ime. Na nke anyị, anyị ga-elekwasị anya na ime ala nke ụwa, ya bụ, elu ụwa ga-abụ mmalite.
1 Ngwurugwu nke ụwa
1.1 Ala jikọrọ ọnụ
1.1.1 Akụ kọntinent
1.1.2 Oke osimiri
1.2 Uwe elu ụwa
1.3 Isi ụwa
2 Akụkụ ụwa dị ka usoro igwe
2.4 Na mbara ala
Ngwurugwu nke ụwa
Iji malite ịkọwa oyi akwa nke ụwa, anyị ga-emerịrị ọdịiche abụọ. Nke mbu, e guzobere njirimara nke kemikal nke uzo di iche iche nke uwa. Na-eburu n'uche ihe mejupụtara kemịkal, anyị na-ahụ Ala jikọrọ ọnụ, uwe mgbokwasị na isi. Ọ bụ oku Aticdị static. Ihe ozo choro na-eleba anya na ihe omuma nke ihe eji ekwu okwu ma obu nke a na-akpo ihe omuma. N'ime ha, anyị na-ahụ na lithosphere, na mbara igwe, na mbara ala.
Ma olee otu anyi si ama ebe akwa akwa na-amalite ma o bu na-agwụ? Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ụzọ dị iche iche iji chọpụta ụdị ihe onwunwe na iche nke n'ígwé site discontinuities. Ihe nkwụsị ndị a bụ mpaghara nke oyi akwa dị n'ime ụwa ebe ụdị ihe eji mepụta oyi akwa na-agbanwe na mberede, ya bụ, ngwakọta kemịkal ya, ma ọ bụ steeti a hụrụ ihe ndị ahụ (site na mmiri siri ike na mmiri).
Nke mbu, anyi ga-ebido ichikota ahihia nke uwa site na ihe omuma ogwu, ya bu, oyi akwa nke uwa ga-abia: Akuko, uwe na isi.
N'ígwé nke fromwa si chemical mejupụtara nlereanya
Ala jikọrọ ọnụ
Ala jikọrọ ọnụ bụ ụwa kachasị elu nke ụwa. Ọ nwere nkezi njupụta nke 3 gr / cm3 na naanị nwere 1,6% nke oke ala niile. E kewara ala ụwa ụzọ abụọ dị iche: Egwuregwu kọntinent na oke osimiri.
Akụkụ kọntinent ahụ buru ibu ma nwee usoro dị mgbagwoju anya. Ọ bụkwa ogbugbo ochie. Ọ na-anọchite anya 40% nke elu ụwa. Ihe mejuputara ya bu obere uzo nke sedimiri, nke bu aja, aja na limestones puta. Ha nwekwara nkume buru ibu nke plutonic buru ibu nke yiri granite. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ọ bụ na nkume nke kọntinent kọntinent ka e dekọbara akụkụ buru ibu nke ihe ọmụmụ ala ụwa nke mere n'oge ụwa niile. Enwere ike ịmata nke a ebe ọ bụ na nkume agbanweela ọtụtụ mgbanwe anụ ahụ na kemịkal n'akụkọ ihe mere eme niile. Dịka ọmụmaatụ, nke a pụtara ìhè na ugwu ugwu ebe anyị nwere ike ịchọta nkume nke oke oge ochie nwere ike iru ruo l3.500 nde afọ.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere oke osimiri. Ọ nwere obere ọkpụrụkpụ na usoro dị mfe. Ejiri okpukpu abụọ mee ya: ezigbo ihe ntanye na ihe ọzọ nwere basalts (ha bụ nkume mgbawa ugwu). Akụkụ a dị obere n'ihi na egosila na basalts na-aga n'ihu na-ebibi ma bibie ya, yabụ nkume ndị dị n'oké osimiri ahụ tọrọ ha anaghị akarị narị afọ abụọ.
Na njedebe nke jikọtara ala bụ njedebe nke Mohorovicic (akpụzi). Nkwụsị a bụ ihe na-ekewa ala jikọrọ ọnụ na akwa. Ọ dị ihe dị ka kilomita iri ise n’omimi.
Oké osimiri na-adịkarị njọ karịa kọntinent
Uwe elu ụwa
Uwe elu ụwa bụ otu n'ime akụkụ ụwa nke sitere na isi nke jikọrọ ọnụ ruo n'èzí. Ọ na - amalite mgbe Moho kwụsịrị ma ọ bụ nke kachasi elu n’elu uwa. Ọ bụ ihe 82% nke ala ụwa niile na 69% nke oke ya. Na uwe mwụda mmadụ nwere ike ịmata ọdịiche dị, n'aka nke ya, akwa abụọ kewapụrụ site na Ntughari nke Repetti. Nkwụsị a dị ihe dị ka narị kilomita asatọ na 800 bụ ihe na-ekewa uwe elu na nke ala.
N'elu uwe elu anyị hụrụ "Ngwakọta D". A oyi akwa dị ma ọ bụ na-erughị 200 km miri emi na e ji mara 5% ma ọ bụ 10% nke ya gbazee. Nke a na - eme ka okpomoku si n’etiti ụwa na - apụta site na mkpuchi. Ka okpomọkụ na-arị elu, nkume ndị dị na uwe elu ahụ na-enweta okpomọkụ dị elu karị, mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịrịgo n'elu ma mepụta ugwu mgbawa. Ndị a na-akpọ "Ebe mara mma"
Uwe ahụ nke uwe ahụ nwere ike ịmata site na ule ndị a:
Meteorites nke ụdị abụọ: Nke mbụ bụ nke peridotites na ígwè.
Nkume ndị dị n'elu ala site na uwe ahụ na-ewepụ n'èzí n'ihi mmegharị tectonic.
Anwụrụ ọkụ si na mgbawa ugwu: Ha bụ oghere gbara okirikiri nke miri emi nke magma biliri wee kpughee ha. O nwere ike ịbụ 200 km ogologo.
Ule ndị na-eme ka ebili mmiri na-eme mkpirikpi mgbe ha gafere site na uwe mkpuchi nke na-egosi na enwere mgbanwe oge. Mgbanwe nke oge nwere mgbanwe na nhazi nke mineral.
Na njedebe nke uwe elu ụwa ka anyị hụrụ Gutenberg kwụsịrị. Nkwụsị a na-ekewa mkpuchi ahụ site na isi ụwa ma dị ihe dị ka 2.900 kilomita miri emi.
Isi ụwa bụ mpaghara dị n'ime ụwa. O sitere na nkwụsị Gutenberg ruo etiti ụwa. Ọ bụ okirikiri nke nwere okirikiri nke 3.486 km, ya mere o nwere olu nke 16% nke ngụkọta nke ụwa. Mkpụrụ ya bụ 31% nke ngụkọta ụwa n'ihi na ọ bụ nnukwu ihe dị n'ime ya.
Na isi nke magnetik ubi na-eme ruru ka convection okwukwo nke mpụta isi na-agbaze gburugburu n'ime isi, nke siri ike. O nwere oke okpomọkụ nke gbara ya gburugburu 5000-6000 ogo centigrade na nrụgide kwekọrọ na otu nde na ikuku ikuku.
Okpomọkụ dị na omimi
A na-ekewa isi ụwa n'ime isi na mpụta na ọdịiche ka enyere site na Secondary Wiechert kwụsịrị. Isi dị na mpụga sitere na 2.900 kilomita miri emi ruo 5.100 kilomita ma nọrọ na steeti a wụrụ awụ. N'aka nke ọzọ, isi dị n'ime na-esite na nke dị 5.100 kilomita miri emi n’etiti ụwa a n’ihe dịka puku kilomita isii ma sie ike.
Ihe mejupụtara ụwa bụ iron, na 5-10% nickel na sọlfọ, silikon na oxygen. Ule ndị na-enyere aka ịmata ihe ọmụma nke ihe mejupụtara bụ:
Dị oke oke, dịka ọmụmaatụ. N'ihi oke ịdị elu ha, ha na-anọ n'ime ime ụwa.
Shortagekọ ụkọ n'èzí nke ụwa, nke na-agwa anyị na a ga-enwusi ígwè n'ime.
Ejiri ígwè dị n'ime etiti ahụ, a na-emepụta magnetik ụwa.
Nkesa a sitere na ihe nlere anya nke ejiri mejuputa ihe di iche iche nke uwa na ihe ndi mejuputara uwa. Ugbu a, anyị ga-amata nkewa nke ọkwa nke ụwa site na aomiri echiche nke otu esi arụ ọrụ ya, ya bu, site na ihe omuma ya nke ihe ndi mejuputara ya.
Akụkụ ụwa dị ka usoro igwe
Na ihe nlereanya a, e kewara oyi akwa nke ụwa n'ime: Lithosphere, asthenosphere, mesosphere na endosphere.
Ọ bụ a isiike oyi akwa nwere ihe dị ka 100 km thick nke ahụ sitere na eriri na nke kachasị akwa nke uwe elu. Nke a isiike oyi akwa na lithospheric oyi akwa na gburugburu ụwa.
Ọ bụ ihe mkpuchi plastik nke kwekọrọ n'ọtụtụ uwe elu. N'ime ya convection ugbu a ọ na-emekwa ngagharị mgbe niile. Ọ nwere nnukwu mkpa na tectonics. Ebugharị a sitere na convection, ya bụ, mgbanwe na njupụta nke ihe.
Ọ dị n’ebe dị omimi nke 660 kilomita na 2.900 km. Ọ bụ akụkụ nke uwe mwụda ala na akụkụ nke mpụga ụwa. A na-enye njedebe ya site na njedebe nke abụọ nke Wiechert.
Na mbara ala
Ihe mejupụtara ya bụ etiti dị n’uwa a kọwara n’elu.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ndị ọkà mmụta sayensị anọwo na-amụ ihe dị n’ime ụwa site n’ule na ihe akaebe dị iche iche iji matakwuo banyere mbara ala anyị bi na ya. Iji tụlee ntakịrị ihe anyị maara banyere ime nke ụwa anyị, anyị ga-eji anya nke uche hụ ụwa dịka a ga - asị na ọ bụ apụl. Site na ihe niile anyị nwere na teknụzụ, nyocha kacha omimi enwetarala ihe dị ka kilomita iri na abụọ. Tụnyere ụwa na apụl, ọ dị ka anyị pechara akpatre ikpa ofụri apple, ebe nkpuru nke etiti ha na ochicho terrestrial.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » N'ígwé nke .wa
Ọ dị oke mma, ọ bụ ederede nke oyi akwa dị na ya
Zaghachi alison tatiana parra jaimes
Layer D¨ («abụọ prime D oyi akwa») abụghị 200 kms DEPTH, mana o nwere ihe ruru. 200 kms nke ọkpụrụkpụ. Enwere ozi na-arụ ọrụ, mana ọ bụ ihe zuru oke, na n'ọtụtụ ọnọdụ enweghị nkọwa ga-eme ka onye na-agụ ya nwee mgbagwoju anya.
Adaberela n’isiokwu a maka ihe ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla.
Oke Osimiri na-arị elu ngwa ngwa karịa ka anyị siri chee